भविष्यलाइ हेरेर इन्टरनेटमा लगानी गरेका छाै‌, सेवा उच्चस्तरीय छः भायानेटका प्रबन्ध निर्देशकसँगकाे विशेष अन्तरवार्ता-Setoghar
भविष्यलाइ हेरेर इन्टरनेटमा लगानी गरेका छाै‌, सेवा उच्चस्तरीय छः भायानेटका प्रबन्ध निर्देशकसँगकाे विशेष अन्तरवार्ता
उच्च प्रतिष्पर्धाबीच लाभान्वित बन्दै सेवाग्राही
विनय बोहोरा भायानेट कम्युनिकेसन प्रा.लि.का प्रबन्ध निर्देशक हुन् । नेपालमा लामो समय देखि इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दै आएका उनी पछिल्लो समय नेपालमा इन्टरनेट सेवा निकै प्रतिष्पर्धी बनेको र यसमा सेवाप्रदायकको लगानी समेत निकै नै बढेको उनी बताउँछन् । यद्यपि सेवाप्रदायकको उच्च प्रतिष्पर्धा र पूर्वाधार निर्माणमा गर्नुपर्ने ठूलो खर्चको अलावा कम शुल्कमा नै इन्टरनेट बेच्नुपर्ने अवस्था समेत रहेको बताउँदै उनी भविष्यलाई हेरेर मात्र आफूहरुले लगानी गरिरहेको समेत बताए ।
प्रस्तुत छ उनै विनय वोहोरासँग रहेर नेपालको इन्टरनेट क्षेत्रको बारेमा गरिएको कुराकानीः
पछिल्लो समय नेपालमा इन्टरनेट सेवा कसरी विकास हुँदै आएको छ ?
नेपालमा अहिले इन्टरनेट सेवा २ किसिमले प्रदान गर्दै आइएको अवस्था छ । पछिल्लो समय नेपालमा मोबाइल मार्फत समेत इन्टरनेट सञ्चालनको लागि उच्च गतिको थ्रिजि र फोरजी सेवा सञ्चालनमा छन् । नेपाल टेलिकमले एडिएसएल मार्फत इन्टरनेट सेवा प्रदान गरिरहेको छ । आइएसपीहरुले उच्च गतिको ब्रोडव्याण्ड सर्भिसमा इन्टरनेट दिइरहेका छन् ।
नेपालमा तीव्रताको साथ इन्टरनेट सेवा विस्तार हुनुको कारण के हो ?
नेपालमा मात्र नभई सन् २०१० पश्चात् विश्वभर इन्टरनेट निकै नै तीव्र गतिमा विस्तार भएको छ । पछिल्लो समय फाइबार अप्टिक्समा आधारित इन्टरनेट नै अधिकांशको रोजाईमा पर्ने गरेको छ । युट्युब भिडियो र ठूला–ठूला फाइलहरुको ट्रान्सफर गर्ने लगायत सबै कामहरु अहिले इन्टरनेटमा आधारित हुँदै गएको कारण अहिले इन्टरनेट जीवनको अभिन्न पाटोकै रुपमा विकास हुँदै आएको छ । अत्याधुनिक प्रविधिमा भएको विस्तारसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, सूचनाप्रविधि लगायतका कुराहरुको अलावा शपिङ, मनोरञ्जन, खेलकुद, बैंकिङ कारोबार लगायतका हरेक कुराहरु समेत अहिले इन्टरनेटको माध्यमबाट नै चल्ने भएको कारण यसले व्यापकता पाएको मान्न सकिन्छ ।
व्यवसाय विस्तार कस्तो छ ?
पछिल्ला बर्षहरुमा नेपालका शहरी क्षेत्रमा अब बिना इन्टरनेटको घर पाउनै मुस्किल छ । कुनै न कुनै इन्टरनेट सेवा त लिइएकै हुन्छ । नेपालमा यो व्यवसाय निकै राम्रो तवरले विस्तार हुँदै आइरहेको छ । यस क्षेत्रमा अहिले उच्च प्रतिष्पर्धा समेत छ । जसले गर्दा सेवाप्रदायकहरुले निकै प्रतिष्पर्धी दरमा सेवा प्रदान गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
अहिले सेवाप्रदायकहरु विभिन्न छुट तथा अफरहरुमा केन्द्रित देखिन्छन् । यसको कारण के हो ?
पछिल्लो समय सेवाप्रदायकहरु उच्च प्रतिष्पर्धा बीच आफ्नो सेवा विस्तार तथा ग्राहक सन्तुष्टिलाई मध्यनजर गरेर निकै सस्तो दरमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यतामा छन् । यसकारण सेवाप्रदायकहरुले एकातिर शुरुमा जडान गर्ने क्रममा नै विभिन्न अफरहरु उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ भने सेवा लिने क्रममा पनि नियमित ग्राहकलाई निकै भारी छुटमा सेवा दिनुपर्ने बाध्यता छ । यो आफैंंमा जुन किसिमले अस्वस्थकर बनिरहेको छ, जुन ठूलो चिन्ताको विषय समेत हो । साथै प्रतिष्पर्धी बजारमा आफु अग्रस्थानमा रहनको लागि निकै छुटमा सेवा दिनुपर्ने अवस्था समेत छ । यसबाट सेवाग्राहीहरु पनि लाभान्वित भएका छन् ।
अबको बजार सम्भावना कस्तो रहन्छ ?
बजारमा अझै पनि इन्टरनेटको माग व्यापक मात्रामा बढिरहेको छ । सोही बमोजिम सेवा विस्तार पनि भइरहेको छ । पूर्वाधार विकासको निम्ति हामीले निकै नै ठूलो रकम लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यो निकै खर्चिलो समेत बनेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा इन्टरनेट सेवा कुन रुपले अघी बढ्छ भन्ने कुरा नेपाल सरकारले यस क्षेत्रलाई कसरी लिन्छ र कर छुट तथा अन्य सुविधाहरु सम्बन्धी कस्तो नीति लिन्छ भन्ने कुरामा समेत निर्भर रहनेछ । अहिले नेपालमा इन्टरनेटको विस्तार त भएको छ तर उपभोक्ताबाट हामीले धेरै रकम सेवा बापत लिने वातावरण भने छैन ।
नेपालमा अहिले पनि गुणस्तरीयताको हिसाबले उच्चस्तरीय मानिएको ‘फाइबर टु द होम’ प्रविधिबाट इन्टरनेट सेवा प्रदान गरिएको छ । इन्टरनेट नेपालमा उत्पादन हुने नभई बाहिरबाट नै भित्र्याउनुपर्ने वस्तु हुँदाहुँदै पनि यति सुलभ दरमा सेवा प्रदान गर्न सक्नु नेपालको लागि निकै राम्रो कुरा हो । नेपालमा अहिले सम्म कुनै पनि सर्भर र डाटा सेन्टर उपलब्ध नभएको अवस्थामा हामी विदेशमा निर्भर रहनु हाम्रो बाध्यता समेत बनेको छ ।
सेवा प्रदान गर्ने क्रममा कस्ता समस्याहरु आउने गर्छन् ?
हामीले निरन्तर रुपमा १ बर्षका ३ सय ६५ दिन नै स्तरीय सेवा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि हामीले राम्रो तवरले सेवा दिने मान्यता राख्दाराख्दै पनि विभिन्न प्राविधिक समस्याहरुको कारण हाम्रो सेवामा कहिलेकाहीँ समस्या आउन सक्छ । हामी सम्भावित प्राविधिक समस्या समाधानको निम्ति हामी निरन्तर लागि नै रहेका हुन्छौं । तर प्राविधिक पक्ष पूर्ण रुपमा हाम्रो हातमा नहुने भएको कारण कहिलेकाहीँ केही समस्या आउनु स्वभाविक नै हो । यद्यपि जनताले उच्चस्तरीय सेवा चाहेको अवस्थामा हामीले उच्च दबाबको बीच सेवा प्रदान गर्नुपर्ने जरुरी छ ।
कहिलेकाहीँ इन्टरनेटको गति घट्न सक्छ । कहिलेकाहीँ सर्भरमा आउन सक्छ । यस क्षेत्रमा आउन सक्ने थुप्रै समस्याहरु छन् । जसले गर्दा सेवा प्रदान गर्ने कार्य निकै जोखिमपूर्ण समेत छ । नेपालमा पूर्वाधार लगायतको निम्ति प्रयाप्त काम हुन नसकेको अहिलेको अवस्थामा पनि नेपालमा जुन तवरले इन्टरनेटको क्षेत्र विकास भई अहिलेको अवस्थाम आएको छ, के हामीले यसमा गर्व मान्नुपर्दैन ?
विभिन्न समस्याको वावजुद अहिलेको अवस्थामा आएको इन्टरनेट जुन रुपमा सुधार हुनुपर्ने थियो, त्यो भने हुन सकेको छैन । यसलाई सुधार गर्नको निम्ति हामी पनि सोही बमोजिम निरन्तर लागि नै रहेका छौं ।
इन्फ्रास्ट्रक्चर शेयरिङ अवधारणा कत्तिको सहज रहेछ ?
इन्फ्रास्ट्रक्चर शेयरिङ अवधारणा आफैंमा निकै गाह्रो काम हो । एकातिर आफ्नै प्रतिष्पर्धीसँग सहकार्यमा काम गर्नु मानसिक रुपमा सहज तयार हुन नसकिने क्षेत्र हो भने अर्को पक्ष भनेको पहिले निर्माण भएको पूर्वाधार आफ्नो आवश्यकतालाई मात्र मध्यनजर गरी बनाइने हुनाले त्यसले अर्कोलाई समेत सेवा दिन समेत गाह्रो पर्ने अवस्था समेत छ ।
यद्यपि अहिले सम्म जुन संरचना जसरी बनेका छन्, यी संरचनामा शेयरिङ समस्याको रुपमा देखिएको भएपनि अबका दिनमा निर्माण गरिने संरचनालाई भने नियामक निकायले सामुहिक रुपमा प्रयोग गर्न सकिने किसिमले नीतिगत व्यवस्था गरी सोहीबमोजिम काम गर्न सकिने अवस्था समेत छ ।
तपाईंंहरुले सेवा शुरु गर्दाका शुरुका दिनमा नेपालमा इन्टरनेटको पहुँच कस्तो थियो ?
हामी यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने समयमा नेपालमा इन्टरनेट विलासी वस्तु जस्तो थियो । मान्छेलाई अनिवार्य वस्तु बनेको थिएन । तर अहिले यो अनिवार्य नै बनेको छ । यससँगै अबका दिनमा इन्टरनेटबाट नै व्यावसायिक कामहरु समेत हुन थालेको अवस्थामा जसले राम्रो सेवा दिन सक्छन् । तिनै कम्पनीलाई मात्र उपभोक्ताले विश्वास गर्ने अवस्था समेत बनेको छ । नेपालमा अहिले ग्राहकहरुले जुन गुणस्तरीयता खोजेका छन्, त्यो कार्य त्यति सहज भने नभएको कारण हामी सेवाप्रवाहमा निरन्तर खट्नुपर्ने अवस्था छ ।
तपाईंहरु इन्टरनेट सेवामा प्रवेश गर्दा यति छोटो अवधिमा यो क्षेत्र यसरी विकास हुन सक्ला भन्ने सोच्नुभएको थियो ?
हामीलाई लाग्थ्यो कि नेपालमा इन्टरनेटको बजार अवश्य राम्रो हुनेछ । तर यति छोटो अवधिमा नै यसरी इन्टरनेट व्यापक प्रयोगको माध्यम बन्ला भन्ने बारे भने हामीले सोचेका थिएनौं । अहिले सम्म आइपुग्दा भने सबै किसिमका मानिसहरुको लागि इन्टरनेट अनिवार्य र शक्तिशाली प्लेटफर्म बन्न पुगेको छ ।
शुरुमा काम गर्दा लगानी र पूर्वाधार निर्माणमा कसरी काम गर्नुहु्रन्थ्यो ?
नेपालमा हामीले सेवा शुरु गर्दा आफैंले पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था थिएन । हामीले दूरसञ्चारकै डायलअप प्रयोग गरेर सेवा दिने काम गथ्र्यौं । ग्राहकको घरमा भएको टेलिफोन लाइनको आधारमा हामीले हाम्रो नम्बरमा कनेक्सन गराई सेवा प्रदान गथ्र्यौं ।
त्यस पश्चात् डायलअप प्रविधि विस्थापित भई स्याटेलाइटबाट इन्टरनेट सेवा शुरु भएपछि भने नेपालमा इन्टरनेट निकै नै महँगो भयो । ब्रोडव्याण्डमा आधारित यो इन्टरनेट भन्दा पछाडि हामीले जब भारत लगायत बाह्य मुलुकबाट ‘हाइ क्यापासिटी फाइबर अप्टिक्स ब्याण्डविथ’ ल्याउन सक्यौं, त्यस पश्चात् मात्र यसको उपलब्धता, महत्व र आवश्यकता तथा पहुँच सहज रुपमा बढ्दै गएको हो । अहिले इन्टरनेट सबैको लागि नयाँ दुनियाँ बन्दै गएको छ ।
सेवाप्रदायकहरुको मुनाफाको हिसाबले यो क्षेत्र कस्तो क्षेत्र हो ?
अहिले इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुको निम्ति यो क्षेत्र निकै ठूलो लगानीको क्षेत्र बनेको छ । यसबाट मुनाफा लिन १० औं बर्ष लाग्ने अवस्था छ । हामीले धैर्यतापूर्वक भविष्यलाई हेरेर मात्र लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । हाम्रो लागत निकै नै बढेको छ । अहिले सेवाप्रदायकहरुको लगानी पूर्वाधार निर्माण, सेवा विस्तार र नियमित सेवाप्रवाहमा विशेष प्रतिवद्धताको साथ काम गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत छ ।